Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka soo hor jeestay in dekedda Muqdisho ay maamusho shirkad Turki ah. – idalenews.com
Baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka soo hor jeestay in dekedda Muqdisho ay maamusho shirkad Turki ah.
Mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa ay ku diideen heshiis ay la gasay shirkad Turki ah oo loogu wareejiyay dekedda Muqdisho.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ka soo horjeestay in maamulka dekedda weyn ee magaalada Muqdisho lagu wareejiyo shirkad laga leeyahay dalka Turkey. Baarlammaanka oo shalay Muqdisho ku yeeshay kulankii 5-aad ee kalfadhiga 4-aad ayaa soo saaray go’aan ka kooban 4 qodob oo ku wajahan arrimaha dekedda Muqdisho.
Xildhibaannadu waxaa kalo ay dood adag ka yeeshen labo arrimod oo horay loo horkeenay,waxaana qeyb ka ah labada qodob shirkadda Turkiga ah ee lagu wareejiyay maamulka dekedda weyn ee Muqdisho,waxaana xildhibaannadu ay sheegeen inaanay xukuumaddu ku wareejin karin shirkad shisheeye dekedda illaa go’aan laga gaaro sharciga maal-gashiga dalka.
Sidoo kale xildhibaannada baarlamaanka waxaa ay u codeeyen in muddo 30-maalmood gudahood ay xukuumaddu ku hor keento baarlamaanka heshiiskii lala galay shirkadda dekedda Muqdisho lagu wareejiyay.
Xukuumadda federalka ah ee Soomaaliya ayaa shirkad laga leeyahay dalka Turkiga la gashay heshiis ay ku maamusho howlaha dekedda weyn ee magaalada Muqdisho.
Odayaasha Dhaqanka Hawiye oo ka hadlay tallaabada Muungaab uu xafiis kaga furtay Degmada Heliwaa.